Vai Wakamboda šeit kutanga yako blog? Kana, iwtove uine bhurogi iyo iwe hauna chokwadi kuti inotora sei kuenda kune inotevera nhanho?
Kana mhinduro jako iri "hongu" saka iri peji ndiyo nzvimbo yekuve.
0.0.1 Mune ino yekublogi giredhi, mēs esam uchadzidza:
0.0.2 Nei iyi bhurogu chinyorwa? Zvishoma nezvangu
1 Čitsauko 1. Kumisa emuārs kubva kuScratch
1.1 1. Sarudza yakanaka webhu inomirira uye zita rezita
1.1.1 Domēna vārdi – Kupi Kunyoresa?
1.1.2 Webhu Kubata – Kuti Ubate emuāra ziņojums?
1.1.3 Yakakurudzirwa emuārs Kubata kweNewbies
1.2 2. Punktu domēna DNS kune yako tīmekļa resursdators
1.3 3. Isa WordPress kune yako webhu saiti
1.3.1 WordPress rokasgrāmata Kuiswa
1.3.2 WordPress Imwe-Dzvanya Kuisa
1.4 4. Tsvaga yako WordPress Admin Peji uye Login
1.5 2. Japābhadharvas WordPress motīvu klubs
1.5.1 naka motīvi
1.5.3 Mapulagi ekuita zviri nani bhuroka
1.5.4 Spraudņa yeGennberg bloks
2 Chitsauko 4. Kutsvaga Niche uye Kugadzira Zviri mukati
2.1 Nzira yekusarudza sei chaiyo blogošanas niša?
2.1.1 1. Zadza chinodiwa
2.1.2 2. Činhu chaunofarira
2.1.3 3. Musoro une simba rekugara (rinogara riripo)
2.1.4 4. Inobatsira
3 Čitsauko 5. Kukura Yako emuārs Kuverenga
3.1 1. Nyora chinhu icho vanhu vanoda kuverenga
3.2 2. Batanidza nenharaunda yako
3.3 3. Ita shuwa kuti blog rako riri nyore kuverenga
3.4 4. Emuārs kupindura
3.5 5. Q & Mapuratifomu
4 Čitsauko 7. Kushandisa Mahara Kubhuroka Maturu
4.2 Kugadziriswa kwemifananidzo
4.3 Mahāra emahara Mifananidzo & Mifananidzo
4.4 Mareferenzi & Tsvagiridzo
4.5 Sociālie mediji, Kušambadzira & SEO
4.6 Web analīze & Kugadzira
4.7 Webhusaiti Yekumhanyisa Kuedza
5 Kubhuroga Mibvunzo Inowanzo Bvunzwa
Mune ino yekublogi giredhi, mēs esam uchadzidza:
Nei iyi bhurogu chinyorwa? Zvishoma nezvangu
Ini ndakatanga Webhu Saiti Kubata Zvakavanzika (WHSR) kumashure muna2008, uye nekutenda muchidimbu kugamuchirwa kukuru nharaunda yebhulogi isu taenda kubva pasimba pasimba. Kubva ipapo, WHSR yakura kuti ive imwe yenzvimbo dzeNet dzinotungamira dzekupa webhu mazano, uye ini ndakwezva chiratidzo chemamwe manzwi akasimba mukubhuroka kwemazuva ano – vese vakapa humbowo muegau yujugau yujuou iuhuu iuhuu iuhuu, ojoou ihuu, ivou iuhui, ivou, ivou, ivou iujūu, iu, ivou, ivou, ivou, ivou, ivouu.
Nenhaurwa iyi isina-nonsenss, ini ndichave ndichikupa iwe dzimwe dzinokurumidza, newore kunzwisisa uye pamusoro pese dzinogadzirisa matambudziko ako ekubhuroka matambudziko – akavakirwa kubva pane angu ruzivo uye kubva munvanarivan.
Mana peji remunyori paYounglogger.com – Ini ndakaburitsa kakawanda muhuwandu hwepamusoro renhoroondo blogger yekubatira saiti pakati pe2015 – 2018.
Čitsauko 1. Kumisa emuārs kubva kuScratch
Zviri nyore uye zvakachipa kuti utange blog muna 2020.
Programmatūra inonyanyozivikanwa yekubloga, WordPress.org, yakasununguka. Nyanzvi yakagadziriswa WordPress tēma ir saistīta ar kartēm. Uye kune chaiwo mamirioni emahara konsultācijas kuti iwe utange (kusanganisira iyi). Iyo chete mutengo unobatanidzwa kutanga emuārs ndiyo mari yaunobhadhara kune webhu saiti uye zita rezita.
Chokwadi, inogona kupenga kwazvo munguva inotevera; asi kazhinji kutaura, blogošana inoita-unokwanisa kune wese munhu ane komputa neinternet. Muchokwadi iwe unogona chaizvo kugadzira bhurogu uye kuiita ichimhanya mumaminetsi makumi maviri anotevera. Matanho anotaurwa mumatanho anotevera ndiwo chaiwo maitiro andinoita mabloggi angu pakutanga.
Chaizvoizvo chete zvaunoda kuti uite:
Sarudza yakanaka webhu inomirira uye zita rezita
Rongedza yako domēna DNS kune yako tīmekļa resursdators
Isa WordPress kune yako itsva webhu inomiririra (zviri newore kwazvo kushandisa auto-simaki).
Pinda kune yako WordPress publicēja jauno vārdu yako yekutanga post.
Uye … ndizvozvo.
Zvinonzwika nyore? Unobheja!
Ndiri kukufambisa iwe nematanho pazasi. Inwawa wakasununguka kuti kana iwe uchitoziva nzira yekumisa yako blog.
1. Sarudza yakanaka webhu inomirira uye zita rezita
Kuti utange blog inozvitarisira yega, iwe unotanga kuda zita rezita uye webhu account account.
Yako domēna izita re blog blog yako. Haisi chinhu chemuviri chaunogona kubata kana kuwona; asi kungori tambo yeavara inopa webhusaiti yako kuzivikanwa – senge zita rebhuku kana nzvimbo. Yako domēns ‘inotaurira’ vashanyi vako kuti ndeipi mhando yeblogi yavari kushanyira.
Tīmekļa mitinātājs, kune rumwe rutivi, ndiyo nzvimbo kwaunochengetedza yako blog zvinyorwa – mazwi, emuārs zvinyorwa, mifananidzo, mavhidhiyo, nezvimwewo.
Domēna vārdi – Kupi Kunyoresa?
Mēs esam unogona kusarudza uye kunyoresa yako domēna mazita kuburikidza nesizinda reģistratūra. GoDaddy, NameCheap, kuyengerera, uye Domain.com ndevamwe vevakanyanyozivikanwa vanyoresa pamusika.
Ziva kuti zvakakosha kuparadzanisa domēns kunyoresa kubva kune tīmekļa mitinātājs Yako. Izvo nekuda kwekuti webhu yako inomiririra inopa dhizaini hazvireve kuti iwe unofanirwa kurega iyo kambani yekutambira ichidzora yako yekunyoresa domain. Ini pachangu, ini ndinoshandisa NameCheap kubata yangu domēna kunyoreswa; asi chero chero mukurumbira wedare reģistratori unofanirwa kunge wakanaka. Nekuita izvi, ini ndinokwanisa kuchinja dunhu rangu DNS chero nguva ini yandinoda uye nekudzivirira pachangu kuti ndive ndakavharwa nechero imwe webhu inomiririra. Ini ndinokurudzira zvikuru kuti uitewo nezve rako rekuchengetedza.
Webhu Kubata – Kuti Ubate emuāra ziņojums?
Kana zviri zvekubata webhu, tarisa zvangu yakanakisa webhu inotora inotora uye hostinga indekss.
Kune kutanga, ini ndinokurudzira kutanga diki in iyo yakagovaniswa webhu inomiririra.
Mukugovana kwekugovana – Kunyange zviwanikwa zvekugashira zvidiki zvichienzaniswa nevamwe (VPS, gore, nezvimwe), iwe uchada bhajeti shoma (kazhinji <USD 5 / mēnesī (pakusainira) uye ruzivo rwehunyanzvi kutanga. Kana uchisarudza webhu inomirira blog rako, izvi zvinhu zvishanu zvekutarisisa:
kuvimbika -Emuārs yako inoda kuve yakagadzikana uye iripo tiešsaistē 24 × 7.
havukavu -Iwe unoda muenzi anotakura zvinhu nekukurumidza nekuti kumhanyisa kunokanganisa ruzivo rwevashandisi uye yekutsvaga mamiriro
Cenu noteikšana -Kubata ne <USD 5 / mēn. Kutanga kwakanaka, haudi mushandi weprimari panguva ino.
Kamuri jekukura – Iwe uchazoda kutambira zvekusimudzira (zvimwe zvinhu, sevha yakawanda simba, nezvimwewo) sezvo blog rako richikura.
tsigira -Interneta inogara ichichinja, zvinogara zvakanaka kuti uve nemumwe munhu kuti akudzosere kudivi rehunyanzvi.
Yakakurudzirwa emuārs Kubata kweNewbies
Tora mablogiki maviri paInMotion Hostings jūs mēnesī 3,99 USD.
Shanyira webhusaiti: https://www.hostinger.com/
Hostinger ndeimwe yemhando dzakachipa dzewebhu dzakakomumberza, kunyanya panguva yekusaina nyuchi. Kunyangwe kuve iri kambani yekutambira bhajeti, Hostinger iri kupa matani emari yekutanga yekutarisira ayo akakodzera kune blogger.
SiteGround inobhadharisa madhora 3,95 / mēnesī nekuda kwehukadzi imwe bhurogu.
Pro padoms: Kungoti webhu saiti inozivikanwa, bīstamības kuti ndiyo yakanaka kune yako emuārs. Tarisa uone kuitirwa kwekutambira uye wonyatsoongorora usati waita sarudzo.
2. Punktu domēna DNS kune yako tīmekļa resursdators
Pārliecinieties, ka jums ir jāreģistrējas DNS reģistratūrā, kurā reģistrēts reģistrators (ja jums ir domēna yako padanho # 1), tīmekļa vietnes saiti yako sevha (InMotion hostings, Hostinger kana SiteGound).
DNS inomirira domēna vārds Sisitimu uye inoshandiswa kuendesa chero inouya mushandisi yakanangana nekero ye IP server. Nekudaro, kana mushandisi apinda "WebHostingSecretRevealed.net" zvinyorwa zveDNS zvinotora IP kero yewebhu yangu inomiririra uye yekushandira saiti yangu kune mushandisi.
Semuenzaniso: Inovācijas mitināšanas vietņu serveri kuGoDaddy.
Heano iwo nhanho-ne-nhanho mirairo pakuvandudza yako emuārs DNS pa GoDaddy vai Namecheap.
3. Isa WordPress kune yako webhu saiti
Kuti utange blogošana uchishandisa WordPress unotanga kuda kuisa system mu web host yako. Izvi zvinogona kuitwa pamawoko, kana kushandisa otomatiki kuisa-bhatani rekuisa programu. Maitiro ese ari maviri ari nyore uye anogona kuitwa nyore.
WordPress rokasgrāmata Kuiswa
Mukukurumidza kutarisa, heino matanho aunofanirwa kuita:
Dharira uye pakotni WordPress pakiti kune PC yako.
Gadzira datu bāze ar WordPress rūts tīmekļa serveri yako, uyewo weMySQL wandinoshandisa ropafadzo dzose dzekuwana nekugadzirisa.
Dzorera zvakare wp-config-sample.php fails ku wp-config.php.
Vhura wp-config.php mumagwaro editor (notepad) uye uzadza nhoroondo yako ye andmeba.
Isa maFaira eWePress munzvimbo yakada pane web server yako.
Runza WordPress instalēšanas skripts nekuwana wp-admin / install.php mu tīmekļa pārlūks yako. Kana iwe waisa WordPress mumudziyo wechirongwa, unofanira kufona: http://example.com/wp-admin/install.php; kana iwe wakaisa WordPress mumutauro wayo unonzi blog, somuenzaniso, unofanira kufona: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Uye iwe waita.
WordPress Imwe-Dzvanya Kuisa
Vazhinji blogeris mazuva ano havaise yavo WordPress manuāli.
Nekutsigirwa kweimwe-bhatani kuisa mabasa se Softaculous uye Mojo Market Place (Zvinoenderana nekuti ndeipi webhu yauri kushandisa), iyo yekuisa maitiro yakatwasuka zvakanyanya uye inogona kuitwa muchingori nyore kudhiza.
Kwezita rako, iyo inotevera mifananidzo inoratidza kwaunogona kuwana iyo auto-yekuisa chimiro pawewe Hostinger paneļa. Kuisa WordPress, ingobaya pane yakatenderedzwa icon uye uteedzere dummy-chiratidzo mirairo – yako WordPress sistēma inofanirwa kunge iri kumusoro uye ichimhanya mune isingasviki maminitsi mashanu.
Semuenzaniso: mēs izmantojam WordPress unogona tīmekļa vietni saiti mune mashoma mashoma uchishandisa Hostinger Auto Installer (shanyira Hostinger pano).
Zvinhu zvinogona kutaridzika zvakasiyana kune akasiyana webhu saiti asi maitiro acho akafanana. Saka usanetseka kana usiri kushandisa imwe yeiyi maenzi yandiri kuratidza pano.
Ini pachangu ndinofunga WordPress bloķēšanas bloķēšana chikuva cheNewbies. Zvichienderana nehuwandu kubva Kuvakwa Na, anopfuura 95% emabloggi muSavienoto Valstu akavakwa achishandisa WordPress. Munyika yose, kune zvese Mabhiriyoni makumi matatu emablogi anomhanya paWordPress.
4. Tsvaga yako WordPress Admin Peji uye Login
Paunenge uchinge waisa yako WordPress sistēma kuisirwa, ja vienīgais URL vietrādis ir yekunongedza kune yako WordPress mutariri peji. Muzhinji, iyo URL ichave chimwe chinhu chakadai (zvinoenderana nefolda yawakaisa iyo WordPress):
Enda kune iyi URL uye uwane neako iepriekš iestatīts lietotājvārds uye parole; uye kubva ipapo, iwe zvino uchave uri kumashure-kumagumo (dhibhodhi) yeyako yeWebhusaiti yako – iyi ndiyo chikamu cheblogi uko iwe chete sewe maneja ungakwanise kuwana.
Kugadzira blognost nyowani muiyo WordPress Gutenberg nyowani.
Iyo yazvino vhezheni yeWordPress panguva ino yekunyora iri shanduro 5.3.2 – neatgriezeniskā saite, izmantojot WordPress Gutenberg semanyorero edhita. Gutenberg inounza kusununguka kwakawanda kuchikamu cheWordPress. Izvi zvinonyanya kukosha kune vanotanga sezvo zvinhu zvakawanda sekumisikidzwa kwemavara uyezve hazvichadi kudhindwa. Iyo bloķēšanas sistēma inobatsira neyechinyorwa kurongedza manejimendi zvakare.
Kuti unyora uye kuparidzira mutsva wekutsvaga, uorena yore kuenda kuruboshwe rworuboshwe, chengeta ‘Posts’> ‘Wedzera Izvo’ uye iwe uchatungamirirwa kune chinyorwa chekunyora. Dzvanjas “priekšskatījums” kuti uone kuti zvinhu zvakatarisa sei pamucheto wepamberi (izvo vaverengi vako vachazviona), bhura “Shingai” kana kambani yapera.
Hola! Es ikikovino unayo yako yekutanga bloga ierakstu yakabudiswa.
Kušiririva: WordPress motīvu katalogs
Apa ndipo paunogona kuwana šajos vārdos WordPress tēma. Mitauro yakanyorwa mune ino dhairekitori inotevera yakasimba mibairo yakapihwa nevakagadziri veWordPress, nekudaro, mumaonero angu, iyi ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuwana yemahara, bug-shoma theme yemagadzirw.
2. Japābhadharvas WordPress motīvu klubs
Imwe nzira yekuwana yakakwirira yepamusoro yenyaya dzakabhadharwa ndeyokutumira kune WordPress Theme Club.
Kana inguva yekutanga iwe kunzwa nezveDhijitari Makirabhu, heino mashandiro ayo: Unobhadhara mari yakakwana yekujoinha kirabhu uye iwe unowana zvigadzirwa zvakasiyana zvinopihwa mumakirabhu. Motīvi motopihwa muTimu yeKirabhu kazhinji dzinogadzirwa nekunyatsogadziriswa
naka Motīvi, Studio Press, Artisan Motīvi Ndivo vatatu vema WordPress Motīvi Klubi Ndinokurudzira.
Pane vakawanda vakawanda kune uko – mamwe makiragi kunyange anotora kune imwe shizimusi, yakadai seasitori kana zvikoro; asi isu tinongotarisa zvitatu munyaya ino.
Nzvimbo dzakasiyana-siyana Zvidzidzo – Kupfuura 80 labākās WordPress tēmas, visas panorāmas atslēgas vārdi čivināt madhemoni demonstrācijas.
Kušiririva: StudioPress.com. Mutengo: USD 129,95 / musoro kana $ 499,95 / upenyu hwose
Kana iwe uri murefu mēs WordPress lietotājs, ipapo iwe wakambove wakanzwa zveja StudioPress. Izvo zvinozivikanwa nokuda kwayo Genesis Framework, minimālistisks SEO-yakagadzirira SEOProgramma WordPress hurongwa hwevose StudioPress motīvi.
StudioPress ievietots līdzīgā veidā kā yakatarwa maererano nezvinodiwa. Nhungamiro yeGenesisi nemusoro wemwana inowanika mubhadharo wekamwechete mēs 59,99 USD. Nyaya yekutanga, iyo inosanganisira Genesis Framework, ienes 99 ASV dolāru no jauna. Kana uchida kusvika kune dzose, unogona kuripa USD 499.
Yakagadzirirwa yakaitwa nzvimbo dzakapiwa neArtisan motīvi.
Dzidza zvimwe: Heano huwandu hwezvimwe zvinhu zviri nyore zvaungaita kuti udzivirire iyo yako Blog blog
Mapulagi ekuita zviri nani bhuroka
Kana zvasvika kune emuāra veiktspējas optimizēšana, W3 kopējā kešatmiņa uye Swift Performance zvinonyanya kufarirwa sarudzo.
Mamwe maviri ekuita plugins ir vienīgais, kas ļauj jums izveidot mākoņu uzliesmojumu, WP Super cache. Cloud Flare ipulagi yakasununguka inopiwa nekambani yeCNN, Cloud Flare; nepo WP Super Cache ichigadziriswa neDonncha uye Automattic, iyo kambani iyo yakagadzira uye inoshanda WordPress ikozvino.
Spraudņu kešatmiņa inofanirwa-kuve nayo mune yazvino kublogi nyika – inovandudza mushandisi ruzivo zvakanyanya nekuwedzera mashandiro e serveris, kudedza nguva inotorwa kurodha uye inowedzera kurasa peji kurodha.
Kana blogs yako ine akawanda mifananidzo mairi – funga kuwedzera EWWW Image Optimizer. Iyo imwechete-tinya mufananidzo optimizētājs iyo inokwanisa kukwirisa mafaera emufananidzo mumaraibhurari yako. Iyo inewo otomatiki mufananidzo yekumanikidza chimiro kuti uderedze hukuru hwemifananidzo paunenge uchizviyisa. Nekugadzirisa mifananidzo, iwe unogona kudedza iyo mheji nguva uye mhedzisiro inokurumidza kuita saiti.
Dzidza zvimwe: SEO 101 jekutanga nguva blogs
Spraudņa yeGennberg bloks
Nekuunzwa kweGutenberg mupepeti muWordPress 5.0, mabloggi anogona ikozvino kugadzira zvemukati vachishandisa block-edit edit. Nekusagadzika, WordPress inopa seti yezvinyorwa zvekutanga zvemavharutsi senge ndima, mufananidzo, kubiza-kune-chiito bhatani, pfupi, uye zvichingodaro. Nekuwedzera muGutenberg bloka spraudņi, mēs esam unowedzera kuwedzera zvimwe zvinosanganisika (semuenzaniso – FAQ, akordeons, munyori nhoroondo, karuselis, tinya-ku-ma-tweets, GIF bloks, nezvimwewo) kune yako blog.
Yakasimba, Ekupedzisira Mabhande, uye CoBlocks matatu matatu nyore uye yemahara Gutenberg Bloķēt spraudņus kuti uedze.
Chitsauko 4. Kutsvaga Niche uye Kugadzira Zviri mukati
Izvi ndizvo zvinowanzoitika kuti newbie inotanga blog: ivo vanganyora nezvebasa ravo neMuvhuro, varaidzo neChipiri, mafirimu avakatarisa neChitatu, uye maonero ezvematongerwo enyka78ti mevhiki. Muchidimbu, vanhu ava vanongonyora pane dzakasiyana siyana dzemisoro vasina chinangwa chekutanga.
Hungu, mabhugi aya aizowedzera kuwedzera kunotevera pakati pehama neshamwari dzavo; asi ndizvo zvazviri.
Zvakaoma chaizvo kuve nehuwandu hwakakosha hwevaverengi vakavimbika kana uchinge uchivhara mabloggi zvisina musoro nekuti vanhu havazive kana iwe uri muongorori wemuvhi, muongorori wekudya, kana bhuku rekushora. Vashambadziri vanozengawo kushambadzira newe nekuti havazive zvauri. Kuti uvake blog rakabudirira, unofanirwa kutsvaga niša.
Nzira yekusarudza sei chaiyo blogošanas niša?
Kuti uwane iyo chaiyo yekubloga niša, hezvino zvakakosha zvakakosha kufunga nezvazvo.
1. Zadza chinodiwa
Kana iwe wakambofunga kuti "Ndinoshuva kuti mumwe munhu angabhadhare pamusoro peizvi", iyo ndiyo nguva-ha. Kana iri hurukuro yaungada kuziva zvakawanda pamusoro payo, zvino inenge iine musoro iyo vamwe vanhu vanoda kuziva nezvazvo.
Ndeupi iwe ruzivo rwako rwakasiyana? Vai es esmu unogona sei kupa chimwe chinhu chakasiyana nenyaya iyo pasina mumwe munhu anogona? Inogona kunge iripo kuburikidza nekubvunzurudzwa nenyanzvi.
Muenzaniso: Džinas emuārs, Kubvuma Kutadza, inotarisa mukubatsira amai vari kurera vana vane zvinodiwa zvakasiyana.
2. Činhu chaunofarira
Yeuka kuti iwe uchange uchinyora, kuverenga uye kutaura pamusoro pehurukuro yako zuva rega rewe kwemakore mashomanana anotevera. Kana iwe usine chido pane bhuku rako rekutaura, zvino zvingave zvakaoma zvikuru kuramba uchingotenderera nguva dzose.
Uyezve, iwe unonakidzwa kunyora pane zvidzidzo izvi.
3. Musoro une simba rekugara (rinogara riripo)
Nekukakavadzana kwakakura, hazvivimbisi kuti hurukuro yako ichave pano vhiki inotevera. Semuenzaniso, kana iwe unonyanya kufarira Vine uye utanga bhulogi rinotarisana naro, apo izvo zvinowira kunze kwefashoni iwe uchange usiri wehutano. Zviri nani pfungwa yekuisa pfungwa pane imwe hurukuro yakawanda, yakadai se "kuchera makanho emagariro evanhu" kana "mapikicha mapikicha anogwamba". Nenzira iyo, kana fad inowira kunze kwefashoni, bhaibheri rako rinogona kuramba rakatarisa chero ripi zvarinotsiva.
Yako blog inoda kuva mairi chituko chaunogona kuita mari kubva.
Zvibvunze kana iri nyaya ichafadza vaverengi uye vogadzira mari – kungave kuburikidza nekushambadzira kana piemēramgesa. Kana iwe uri blog kubhuroka kuti utsigire bhizinesi rako riripo, blog iri kuunza vatengi vatsva šeit? Kana iwe uri kubhulogi nekuda kwekunge iwe uchishuvira pamusoro penyaya, pane nzira yekuita mari yako wega blog?
ndinoshandisa SpyFu, maksāt par klikšķi yekushambadzira chishandiso, kufungidzira purofiti yeiyo niche dzimwe nguva. Pfungwa yangu kumashure kweizvi – kana vashambadziri vari kubhadhara zviuru zvemadhora kuGoogle Adwords, panofanira kuve nemari inogadzirwa mumunda uyu. Iyi ndiyo mienzaniso miviri yandakawana:
Muenzaniso # 1: Ichi ndicho chirevo chekutsvaga chekugadzirwa kwemafirimu emutambo (funga mitambo yemidhi seAdddas kana New Balance asi duku). Iyi kambani iri kushandisa mari inodarika 100 000 USD mwedzi paAdwords maererano neSpyfu.
Muenzaniso # 2: Ichi ndicho chiziviso chekutsvaga kweI IT risinājumu piegādātājs. Pakanga paine humwe 20 vamwe vatambi vechikuru munharaunda iyi. Iyi kambani, kunyanya, yakatenga zviziviso pa3 846 atslēgvārdi paGoogle uye yakashandisa anenge $ 60,000 pamwedzi.
Dzidza zvimwe: Maitiro ekunyora chero kamwechete makuru ezvinyorwa vhiki neyakaenderana
Čitsauko 5. Kukura Yako emuārs Kuverenga
Chokwadi chinosiririsa kune vazhinji veblogga kunze uko zvakavatora nguva yakawandisa yekuvaka kuverenga kwavo. Kuwana izvairīties no zviuru zvemapeji ekutarisa kunogona kutora mwedzi, uye mamwe mablogiki anehunyanzvi chaizvo haatomboita kunge asvikako.
Aya matanho mashanu anokosha ayo anokubatsira iwe kutora yako blog e-pasts kubva kuZuva 1 kusvika kune chiuru maonero emapeji.
1. Nyora chinhu icho vanhu vanoda kuverenga
Vanhu vari kunyura mumagariro enhau kugadzirisa, nhau barotnes, pasta vēstule, uye dzakasiyana mhando dzekurudzira. Zvinowedzera kuomesesa kuti vanhu vaverenga zvaunotaura. Nekudaro, iwe unogona vachiri kuita zvakanaka kana iwe uchiziva kuti vateereri vako vakanaka ndiani uye zvavari kutsvaga. Funga nezvegeji iri mune yako niša, ndeipi mhando yezvinyorwa zvisipo uye kuti ungaunza sei kukosha kwakawanda kune vateereri vako.
Hezvino zvinhu zvinogona kukubatsira iwe nekutsvaga kwako:
Shandisa zvishandiso zvemagariro evanhu kutsvaga zvakabudirira zviripo munhau zvemagariro. Mukudaro, iwe unogona kugadzira zvemukati mazano zvinowana yakanaka mhinduro kubva munharaunda vezvenhau.
Shandisa zviridzwa zvemukati se Pindura Vanhu Vose kutsvaga mibvunzo yakakurumbira vanhu vanobvunza muGoogle.
Shandisa huwandu hwekuona muYouTube kuti uwane misoro inofarira vanhu.
Shandisa chishandiso chakakosha chishandiso kuona iwo chaiwo maishu anotsvaga vanhu mukati meyiche yako. Iwe unogona kugadzira zvirimo zvichibva pane iwo mazwi akakosha.
2. Batanidza nenharaunda yako
"Yakagoverwa uye yaitwa" haisisiri zita remutambo.
Iwe unofanirwa kugara uchigovana zvawatumira, nguva nenguva. Kana iwe ukakokwa kujoina boka Pinterest bhodhi rinoenderana niša yako, saina uye govana uye kupindura kazhinji. Kana iwe ukabatana nerondedzero yeakafanana-nemabloggi bloggi, zvisingaiti ivo ivo vanogovana zvinoenderana zvemumwe neumwe nguva – vhiki kana zuva nezuva. Izvi zvichabatsira kukura kuverenga kwako uye kuita.
Gara uchitsvaga dzinza rako – ripa dzimwe nhengo mariri uye ubatane navo.
Batsira kunze kwemapato eTwitter. Taura nezvezvimwe nhengo ‘. Goverana zvinyorwa muzvinyorwa zvako zvetsamba. Tendedza uye mupe mabloggi aunoda iwe nekuridza rimwe vhiki rega reana kana mwedzi.
Bvunza kuti iwe unogona sei kubatsira mumwe munhu kunze kwemupositori wevashanyi kana nokupa muenzi nzvimbo dzemauto. Kutengesa zvavanoshandisa, shandisa shamwari dzavo dzekubatanidza, kusimbisa hukama hwavo pane zvejagarisana kwevamwe vevanhu pavanenge vachidziisa. Sezvo mikana yekuchera vabhogi vauya, avo vanogadziridza vachayeuka rubatsiro rwenyu uye vanokukoka kuti utore.
3. Ita shuwa kuti blog rako riri nyore kuverenga
Ini ndinogumbuka pandinowana bhurogu ine musoro ini ndinonyatsofara chete kuwana izvo zvine chunk hombe yemavara, mashoma ndima, haina misoro kana mabara uye madiki mafoni. Izvi zvinondidzinga.
Pamusoro pezvandakasangana nazvo pamusoro, blogs yako haafanire kuremedza vaverengi nepop-ups uye nekudzvanya-ma-. Panzvimbo iyoyo, ratidza izvo zviri zvinyanzvi kune vaverengi vako. Ziva zvinorema nguva yevaverengi vako uye nzwisisa izvo zvinovatyaira kuti vagare pane yako saiti.
Izvi ndizvo zvaungaita kuti blog yako ive nyore kuverenga:
Šambas emuārs yako uchishandisa mahedhiyo, misoro midiki, mapoinzi, kana rondedzero dzakaverengerwa. Izvi zvinobatsira kuti zvemukati zviratidzike zvakarongeka.
Tambanudza emuārs yako zvemukati kuita zvikamu kana ndima. Rusvingo rwemavara runogona kutaridzika rinotyisa uye runokundisa vaverengi.
Dzivisa kushandisa mafonti efashoni. Namatira nemafuta akachengetedzwa ewebhu akadai seAgency, Gruzija, Times, nezvimwe.
Shandisa chiRungu chinyore uye nyora mumutsara pfupi. Tarisira chinyorwa chako kuverenga chinyorwa chegumi Nemasere.
4. Emuārs kupindura
Kutanga kubviswa, kupindura kumablogi ndiyo nzira ingangonyanya kufarirwa yekuvaka bloga trafiks – kunyanya nekuti vanhu vanoyamwa pakugadzira mhando, kutaura kwakanaka nevasingazive (ini pachangu). Nekudaro, emuārs yekupa mhinduro inzira yakanaka yekuvaka satiksme inoitikawo kune yakasununguka – haigoni kupokana nazvo!
Iko kune maviri miromo yegoridhe yekublogota kupindura:
Gara uchinyora yemhando yepamusoro. Kana iwe usina chimwe chinhu chinonzwisisika chekuwedzera kune iyo nhaurirano, usasiye chirevo ("Ndatenda – zvakanaka pasts" mhinduro … hazvina zvazvinobatsira)
Ingodonhedza chinongedzo pazvinenge zvakakodzera. Usatsemuka, kunyangwe zvingave zvinonetsa sei; zvichadzokera pamoto pamusoro pako.
Nepo mumwe mutemo (kwete mutemo wegoridhe, pamwe), kana iwe ukasiya chinongedzo, usangopa blog yako URL. Pane kudaro, batanidza kune yakakodzera positi yako inowedzera kukosha kune yekutanga positi uye hurukuro. Kusvirwa ndiyo kiyi pano.
5. Q & Mapuratifomu
Foramu uye Q & A mapuratifomu inzvimbo dzakanaka kuwana chigaro pamberi pevako, inofarira vateereri. Idzidziso ndeyekutarisa inoramba ichikurukurirana mune yako niša kuti iwe ugone kuendesa mukati kana uine chimwe chinhu chinobatsira kutaura (uye kwete, kwete yese positi ichave iri koos – asi vamwe vachadaro). Iwe unozoda muverengi akanaka wekudyisa, akadai saFidly, kuti uite basa iri.
Kwete kutsvaga chaiyo yakakwana kana kukwana pam-the-dot mikana?
Gadzira zvimwe zvetsika zvine chekuita nekukuru kupisa kukurukurirana. Semuenzaniso, kana mumwe munhu akabvunza maitiro kuti uwane makodhi akazara nemadhimoni. Mamwe maitiro ndeekuti kana munhu mumwe akabvunza iwo mubvunzo, vamwe vane iwo iwo mubvunzo mumwechete – uye yako foramu mhinduro uye chinongedzo vachararama kuzovayambira zvakare kana nguva yasvika.
Nezve iro Q & A mapuratifomu ekushandisa, ini ndinokurudzira
Quora, Klout, Yahoo! Mhinduro – idzi matatu matatu akanakisa ģenerālis Q&Mapuratifomu
StackOverflow – kana iwe uri muparidzi ari piemēramgesa mapurogiramu mabhuku.
Tripadvisor – Kune vafambi mabloggi
Dzidza zvimwe: Tsvaga dzimwe nzira dzekuita mari emuārs yako uye verenga Kevina Muldoon’s Nyaya yekudzidza sarngesa BloggingTips.com jums 60 000 USD.
Čitsauko 7. Kushandisa Mahara Kubhuroka Maturu
Kunyangwe zvishandiso zvemahara zvinobatsira uye webhu zviripo pamhepo, dambudziko iri kutora ivo pakati pevamwe vese majunks kana / uye maturusi ezvishandiso.
Sechipo chekuparadzanisa chekuverenga mutungamiri wangu kusvikira pano, ndiri kuenda kukupa runyora rwezvishandiso zvepachena zvatinoshandisa nguva yose pa WHSR. Nhanho yakanaka, uye ini ndinoda kuti iwe kubudirire muhupenyu hwako.
Pashure termiņš – avanss chimiro uye girama yekuongorora.
Gramatika – Anonyanya kufarirwa wewebhu kunyorera mubatsiri.
Lietotne Hemingway – izmantojiet jaunākās lietojumprogrammas, lai piekļūtu tām.
Rusununguko.to -Bloķēt zvinotsausa mawebhusaiti kuitira kuti iwe ugone kutarisa pakunyora.
ByWord – Kuvhiringidza mahara kunyorera chishandiso.
Evernote – Chishandiso chimwe chinoda sumo.
Fotors – Hora uye gadzira yakanaka mifananidzo chishandiso zveruzhinji media machira, maposta, kukoka, nezvimwe.
Audekls – Dhizaina mifananidzo yakanaka uye zvemagariro midhiya zvirevo.
Dizaina dizaina vednis -Gadzira mifananidzo yakajeka uchishandisa ma templates emahara uye mifananidzo yakagadzirirwa-yakagadzirwa.
JPEG Mini – Deredza hukuru hwe .jpeg mafaera.
Tinjajas PNG – Deredza hukuru hwe .png mafaera.
Skitch – Kutora zvinyorwa zvemifananidzo.
Pic Monkey -Mubayiro-wokuhwina mufananidzo wedhiza yekugadzirisa.
Pik ku Chart – Nyore infographic chisikwa chishandiso.
Pixlr – Chigadzirwa chekugadzirisa mufananidzo.
Favicon.io – Jakanakisa favicon jenareta, zvachose.
Mahāra emahara Mifananidzo & Mifananidzo
Ikonu meklētājs – Huru yemahara ikonu katalogs.
Morgule Faira – Mifananidzo inopfuura mazana matatu ezviuru mazana matatu yekushambadzira.
Hollow Snap -Mufananidzo wedhairekitori saiti ine yakanaka mifananidzo yemahara yakawedzerwa vhiki nevhiki.
WHSR bezmaksas ikonas -Imahara ikonas zvakagadzirwa veduwe-mumba dhizaini.
Mareferenzi & Tsvagiridzo
Pasaules zinātniskais pārstāvis – Mahara ezvidzidzo zvepamhepo.
Pasaules faktu grāmata -Kusina kutamba – info yenyika zvakananga kubva kuCIA.
Tech Republic – Baltais mapepa, mishumo, uye kesi zvidzidzo pa tech.
Šerpu mārketings – Yemahara kushambadzira mishumo.
Tirdzniecības krogs -Mahara emagazini, chena mapepa, uye makesi kesi.
Hubspot bibliotēka – Yakanaka rekunongedza sosi sarnasgesa.
CrunchBase – Nhau pamakambani ekutanga.
BuzzFeed populāras -Tsvaga ichangoburwa inopisa misoro paBuzzFeed.
Kunyora Kuumba Kunokurumidza -Pfungwa uye inokurudzira kukurira zvidhinha zvekunyora.
Google Alerts -Tora maimeri ekuzivisa pane zvitsva zvawari kuongorora.
Sociālie mediji, Kušambadzira & SEO
Bing tīmekļa pārziņa rīks -Bing yemahara saiti yekuongorora nzvimbo yekushandisa.
Google rīku pārziņa rīks – YeGoogle yemahara saiti yekuongorora nzira.
tevera – Tsika vanokwikwidza vako
Majestic SEO – Mahara vhezheni inokubvumira kuti utarise saiti yekubatanidza faira (CF / TF) nekukurumidza.
Engage Bay -Viss-vienā kushambadzira, sarnasgesa & sevhisi yekushandisa
Safanana Page Checker – Tarisa mapeji anodzokororwa pane yako blog.
Kufanana neExplorator – Tarisa munharaunda metrics ezvako (kana vakwikwidzi ‘) zvemukati.
Čivināt klājs – Mange akawanda Twitter konts mune imwe dhodhi.
Buzz Sumo – Tsvaga zvakakurumbira zvemukati uye zvinofurira pamusoro pemagariro makuru ledhiyo.
Tagu dēlis – sociālo mediju mūzikas kutsvakurudza.
IFTTT – Shambadza zvirimo pane dzakawanda nzanga midhiya mapuratifomu zviri nyore.
Web analīze & Kugadzira
Google Analytics – Mahara webhu statistika.
YouTube Analytics – statistikas rūts yako YouTube mavhidhiyo.
WP statistika – Enzanisa rako Blog emuārs nevamwe.
Procesa iela – Maitiro akareruka uye basa kuyerera maneja.
Webhusaiti Yekumhanyisa Kuedza
Bitcatcha – Tarisa nzvimbo yekumhanya kubva kunzvimbo gumi.
Tīmekļa vietnes pārbaude – Tarisa yewebhu peji kasi.
GT Metrix – Kuyedza uye kurongedza peji rewebhu kurodha kumhanya zvakadzama.
Kubhuroga Mibvunzo Inowanzo Bvunzwa
1. Jakawandas marii kutanga emuārs?
Mari inofungidzirwa kutanga blog inosanganisira zita rezita uye webhu saiti iri pasi pemadhora zana pagore (asingapfuuri madhora gumi pamwedzi). Iyi mutengo inovakirwa pachako pachako pachako-chinzvimbo emuārs (uchishandisa WordPress). Kuputsa kwemitengo kwaizove: 100 ASV dolāru gore rimwe nerimwe .com zita rezita uye anenge madhora makumi matanhatu pagore pamubhadharo webhusaiti webhu.
2. Vabloggi vanobhadharwa sei?
Kuti uwane mufananidzo uri nani wekuti mabloggi anobhadharwa sei, ndakavaradzika mumhando mbiri – imwe ndeyako iwe unobata zvakananga nevatengi kana vashambadziri apo imwe yacho maunopinda chirongwa chinopihwa nekambani kana neti.
Paunenge uchibata zvakananga nevatengi kana vashambadziri, iwe une yakawanda kutonga pamusoro pemitengo. Unogona kuwana mari na:
-Kutengesa premium yezvinyorwa (nzvimbo yenhengo)
– Tiešā kushambadzira
-Kutengesa chigadzirwa chako
– Jobho mapuranga
-Kunyora uye kuburitsa zvakatsigirwa zvikwangwani
3. Sei kutanga emuārs yemahara?
Kune akawanda mapuratifomu maunogona kutanga emahara blog nhasi, izvin zvinosanganisira WordPress.com, Tumblr kana Blogger. Kuti ugadzire bhurogu yemahara, zvese zvaunofanirwa kuita kusaina uye unokwanisa kutanga kuburitsa zvako zvirimo.
4. Ndeipi kubatwa kuseri kweiyo yemahara blogošana chikuva?
Hapana chinouya chemahara munyika yedu. Kune huwandu hwezvakaipa pamwe neyemahara emuāru veidošanas platforma:
-Kuna mitemo yakaiswa pasi nepasita yega yega yaunofanirwa kucherechedza
-Izita remazita eblogi yako rinoratidzika kunge riri svumbunuro senge "myblogname.wordpress.com" kana "myblogname.tumblr.com"
-Kune mashoma mashandiro, spraudņi uye sarudzo yemema yaunogona kuita kune yako blog
– Kazhinji, mapuratifomu emahara anodzikisira sastāvā wekuita mari blog yako
Ini ndinokurudzira kuti utange blog yako uchishandisa yega-yakazvibata yeWordPress.org (sezvandafungira mubhuku rino). Kunze kwekukunda izvo zvisingabvumirwe zvebhurawuza yemahara, kukura kweiyo blog yako hakuganiki.
Kune akawanda mapuratifomu maunogona kutanga emahara blog nhasi, izvi zvinosanganisira WordPress.com, Tumblr kana Blogger. Kuti ugadzire bhurogu yemahara, zvese zvaunofanirwa kuita kusaina uye unokwanisa kutanga kuburitsa zvako zvirimo.
Asi, uku kubatwa:
Pane mitemo yakaiswa pasi nepasita yega yega yaunofanirwa kucherechedza
Iyo zita remazita re bloge yako rinoita senge subdomain yakadai se "myblogname.wordpress.com" kana "myblogname.tumblr.com"
Iko kune mashoma mashandiro, spraudņi uye sarudzo yemema yaunogona kuita kune yako blog
Kazhinji, mapuratifomu emahara anodzikisira sastāvā wekuita mari blog yako
Ekrāna yakatorwa kubva WordPress reklāmas politikas lapa.
わかんぼだここクタンガやこブログ？カナ、イェワトヴェウイネブロギイヨイウェハウナチョクワディクチイノトラセイクエンダクネイノテベラニャンホ? かなみんどろやこいり "本宮" saka iri peji ndiyo nzvimbo yekuve. Contents0.0.1 Mune ino yekublogi giredhi、iwe
Wakamboda her kutanga yako blogg? Kana, iwe watove uine bhurogi iyo iwe hauna chokwadi
Wakamboda tutaj blog kutanga yako? Kana, iwe watove uine bhurogi iyo iwe hauna chokwadi
Wakamboda aqui blog kutanga yako? Kana, iwe watove uine bhurogi iyo iwe hauna chokwadi
Wakamboda 여기 kutanga yako 블로그? 가나, 이와 토 u 오부 오, 이요 이와 우